नेपाली सेनामा १७५ जनालाई जागिर खुल्यो « मेचीखबर
नेपाली सेनामा १७५ जनालाई जागिर खुल्यो
७ माघ २०७२, बिहीबार १०:१७ मेचीखबर
काठमाण्डौ । नेपाली सेनामा एक सय ७५ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । नेपाली सेनाको कार्यरथी विभाग भर्ना छनौट निर्देशनालय जंगी अड्डाले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्दार पदहरुका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेका पदहरुमा समावेशी तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
आवेदकले आवश्यक कागजात तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहित स्वयम उपस्थित भएर १० रुपैयाँको टिकट टाँसेर दरखास्त पेस गर्न सक्नेछन् ।
दरखास्त दिन यही माघ ७ गतेदेखि फागुन ७ गतेसम्म समयसीमा रहेको र त्यसपछि दोब्बर दस्तुर तिरेर सात दिनसम्म आवेदन दिन सकिने सेनाले जनाएको छ ।
आवेदनसँगै सबै ट्रेडको पदिक (प्रा.सु) का लागि चार सय रुपैयाँ, सबै ट्रेडको पदिक (प्रा.ज.म) का लागि तीन सय रुपैयाँ र सबै ट्रेडको बिल्दार (प्रा.अम.)को लागि दुई सय रुपैयाँ आवेदन दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । आवेदन दिनका लागि जंगी अड्डाको पश्चिममा रहेको खेल मैदान क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने छ ।
नेपाली सेनामा बहालवाला रहेको उम्मेद्वारहरुका लागि भने आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने भए पनि उमेर हद लाग्ने छैन । दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम दिन फागुन ७ गते सेवा सुरु गरेको अवधि न्यूनतम एक वर्ष पूरा हुनपर्ने छ भने युनिटपतिरसम्बन्धित पतिको सिफारिस अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
सात सय २६ ब्यावसायीलाई खोप
२ आश्विन २०७८, शनिबार १९:४५
बिर्तामोड । बिर्तामोडमा शनिवार सात सय ३६ जनालाई कोरोना किरुद्वको खोप लगाइएको छ। वाणिज्य सङका
स्याटरडे स्कुलको बार्षिकोत्सबमा बृक्षारोपण
२ आश्विन २०७८, शनिबार १६:१५
बिर्तामोड । बिर्तामोडमा सञ्चालनमा रहेको स्याटरडे स्कूलले आफ्नो ५ औँ बार्षिक उत्सव मनाएको छ ।
युनिकमद्वारा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई राहत प्रदान
२ आश्विन २०७८, शनिबार १५:२७
बिर्तामाेड । नेपाल व्यापार कर्मचारी संघ (युनिकम) नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ
बाम्फाेक प्रहार गरी महिलाकाे हत्या
२ आश्विन २०७८, शनिबार १५:१५
बिर्तामोड । झापाको शिवसताक्षीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी एक महिलाको हत्या गरिएको छ । प्रहरीले
भरतमणिले जिते कमेडी च्याम्पियनको उपाधि
अनेरास्ववियुकाे अध्यक्षमा बराल
३ आश्विन २०७८, आईतवार ०४:१५
२ आश्विन २०७८, शनिबार १७:०६
मेची खबर प्रकाशन प्रा लि द्धारा सञ्चालित
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.: ४५५/०७४/७५ शनिश्चरे रोड, बिर्तामोड, झापा +९७७ ९८० xxx xxxx +९७७ ९८५ xxx xxxx mechikhabar@gmail.com.
Mechikhabar © 2015. Made with 🖤 by Binay Bajagain